🐉 (@Sanay_Moe_Swe)'s conversations - Wattpad
Jan 12, 2021 07:40AM
ကိုယျ့ကို Follow လုပျထားတဲ့သူတှထေဲမှာ Ultimate Note ထဲက [ အဈကိုလေးနဲ့ ဝူရှဲ့]  ကို Ship တဲ့သူတှရှေိလား? သူတို့နှဈယောကျက အရမျးကိုလိုကျဖကျနတောမို့ မနနေိုငျတော့ပဲ ကိုယျတော့ Fanfic ရေးမိပွီ..။
သူတို့ Fan တှရှေိရငျ ကိုယျ့ Wall ထဲမှာ Fic အသဈလေးကို ဖတျပေးနျော..။ Crush ဆိုတဲ့ Title နဲ့ပါ ။သူတို့လေးရဲ့ Fanfic ကို RL သတျသတျလုပျပွီး စုပေးထားတယျ3ခုပဲတှတေ့ယျရျော..။ အမြားကွီးရှိစခေငျြမိတယျ.. ။
ဖတျမယျ့သူမရှိရငျလညျး ကိုယျ့ဘာသာပဲဖတျတာပေါ့ ၊ Pingxie Fan တှကေိုအဖျောလာစပျတာ ♥
@Xiaofeixia အိုငျယား ဘဝတူတှရှေိတယျတော့ ＠＾▽＾＠
@Sanay_Moe_Swe ရေးပေးပါ သာသာရေ ငယျလညျး သူတို့momentsလေးတှေ ခဈြလှနျးလို့  စောငျ့နပေါတယျ
@Amary_Y ခဈြလိုကျတာ  (*´ω｀*)
Suprice တိုက်နိုင်သော သာသာကို အရမ်းချီးကျူးပါတယ်
ရေးသမျှ Fic တွေကလည်း တကယ်ခံစားရတယ်
ဒီသာသာရဲ့ acc ထဲ ဝင်လိုက်တာ ဝဲကယက် ထဲ ရောက် သွားသလိုပဲ....up ထားသမျှ fic တွေ မဖတ်မပြီးချင်း ပြန်ထွက်လို့ မရဘူး...တစ်ခုခုက ညို့ သလိုပဲ ..အဲ့လောက်တောင် ဆွဲဆောင်မှုရှိတယ်...
Xiao Oo Oo ကို Season2လေး လုပ်ပေးပါလား ရောဂါ ရင့်နေပြီ...ရိပေါ်ကို သနားလို့ပါ...S2 ထဲမှာ ရိပေါ်က ပြန်ချေပေးပါလား...ဖြစ်နိုင်မယ်လို့တော့ မထင်ပါဘူး oo ကို တအား ရူးသွပ်လွန်းတဲ့သူက အဲ့သူနဲ့ တူတဲ့သူကိုလဲ ခယပြီး ရူးသွပ်နေမှာကို မြင်မိနေလို့
@Sanay_Moe_Swe အင်းပါ...အဲ့လိုဆိုရင်​တော့ ရိ​ပေါ်ကို အဲ့အ​နေအထားနဲ့ ထပ်မမြင်ချင်​တော့ပါဘူး...
@Junwathone S2 က ရေးဖြစ်မယ်မထင်ဘူး နောက်ပြီး Reader ပြောသလိုပဲ ရိပေါ်က Oo ကိုရူးသွပ်ခဲ့တာ သူပဲထပ်ချစ်ပြရဦးမှာ
သာသာရေ ကွာရှင်းပြီးမှ ငြိ ဆိုတာလေးက ရက်နားလို့ တွေ့တယ်...ဘယ်တော့လောက် ပြန်အပ်ပေးမလဲ ဟင်... အရမ်း ကြိုက်လို့ပါ...
Xiao Oo Oo ကို ဖတ်ပြီး အသည်းခိုက်မတက် ငိုကြွေးနေရပါတယ်....
နောက်ဆုံးထားခဲ့တဲ့စာက ရိပေါ်ကို သေအောင် သတ်ခဲ့သလိုပဲ....
အချစ်ဆုံးကို ဖတ်ရတဲ့ နေရာမှာ ငိုရလွန်းလို့ ရင်တောင် အောင့်တယ်...
အဲ့ဒါကို အရူးက နောင်ဘဝကို ယုံကြည်ပြီး စောင့်နေတယ်တဲ့လား ရူယွမ်ကို ရူးသွပ်လွန်းတဲ့သူက နောင်ဘဝရော ရူယွမ်ကိုပဲ မချစ်ဘူးလို့ ပြောလို့ရမလား...ရိပေါ်ရာ နင့်ကိုလေ အဲ့လောက်တုံးအရလား ချစ်ရလားဆိုပြီး ထုထုရိုက်ချင်တာ...ကိုယ့်ကို မချစ်တဲ့သူကို သေမတတ် နာကျင်တာတောင် ဆုပ်ကိုင်ထားရလား မာန မရှိဘူးလား ဆိုပြီး....
အချစ်ဦးကိုရော နောက်ပိုင်း ကိုရော မှန်းမိပါရဲ့နဲ့ မဖြစ်လောက်ပါဘူး မလုပ်လောက်ပါဘူးဆိုပြီး ဖတ်လာသမျှ သာသာက အသေသတ်တာပဲ..
Season2ကို တောင်းဆိုချင်ပေမဲ့ ရိပေါ်ကို ထပ်မခံစားစေချင်တော့လို့ မတောင်းဆိုချင်တော့ဘူး...ဒီထဲမှာ ရှောင်ကျန့်ကို သောက်ရမ်း သောက်မြင်ကတ်ပြီး သူ အတ္တကြီးပြီး ကိုယ်တိုင် သတ္တိမရှိတဲ့အတွက် ထိခိုက်ရတဲ့သူကို အရမ်း သနားမိတယ်.....
Fic မှနိး သိပေမဲ့ မခံစားနိုင်ဘူး ငိုနေမိတုန်းပဲ...ပတ်ပတ်စက်စက် ခံစားရပေမဲ့ လက်က မချနိုင်ဘူး ရူးပြီ...
ဟုတ်တယ်.ညက အိပ်လို​တောင်မရလို့ တ.ဒအချို​တွေ ပတ်ဖတ်​နေတာ​..ဒါ​တောင်  ဒါကြီးက စိတ်ထဲက ​မေ့​ပျောက်မသွားဘူး ရင်ထဲ ဆို့နစ်​နေတုန်းပဲ...အဲ့ဒါ​ကြောင့်မိုလို့ SE ဆို ​ရှောင်တာ...ဒါ​ပေမဲ့ ဒီ SE က double se ပဲ.....
ဒီလို feeling ကြီးရယ် စိတ်ထဲက​နေ ​ပြေ​ပျောက်ပါ​တော့ ...မခံစားချင်ဘူးရယ် စိတ်ထဲ မ​ကျေနပ်လိုက်တာ...ဒီဇာတ်​ကောင်က အဲ့​လောက်​တောင် လွှမ်းမိုးသွားလို့ ဂါးးးးးး
@Junwathone ဒါက Fic တစ်ခုပါပဲ Reader ရေ..။ အရမ်းကြီးနက်နက်ရှိုင်းရှိုင်း မခံစားလိုက်ပါနဲ့..။ ခေတ်ကာလ မကောင်းတာမို့ ဆက်မငိုနဲ့တော့နော် ခေါင်းကိုက်နေဦးမယ်..။ အိမ်ချင်းနီးရင် မုန့်ကျွေးပြီးလာချော့မိမှာ တကယ် ♥
Reason ficကိုဖတ်ရတာ အစပိုင်းတွေမှာ တအားစိတ်ပင်ပန်းတာပဲ ဆက်မဖတ်ချင်တော့လောက်အောင်ကိုပဲ မကောင်းလို့တော့မဟုတ်ပါဘူး ကောင်းလွန်းသွားလို့ပါ စိတ်ထဲမှာလဲကြိတ်ပြီးဆဲနေတာ ဟီး မမမိုးဆွေကိုတော့မဟုတ်ပါဘူး ဖန်ရှင်းကိုလေ အဲ့တာလည်းကာရိုက်တာအရပါ အပြင်မှာတော့ချစ်ပါတယ် ယုန်ကြီးကိုလည်းအစကတော့ တကယ်ချစ်မချစ် မသိဘဲ ဖန်ရှင်းနဲ့တွဲလို့ ပိစိလေးအမြင်ကတ်ချင်တယ် သိလား ခုကနိုင်ငံရေးမတည်ငြိမ်လို့ ဂရုစိုက်ပါနော် ပြီးတော့ fic တွေပြန်upတော့မယ်ဆိုရင် စားဘဲကိုအရင်upပေးပါလားနော် နော်♥
@Phoenix_Sean_Leoဒူချာချာမဟုတ်ပါဘူး​နော် ​ကောင်းပါတယ် အ​ရေးအသား​တွေ အရမ်းကြိုက်တာ♥
@Phoenix_Sean_Leo ကိုယ့် Fic တွေအကုန်လိုက်ဖတ်နေတာလားသိဘူး..။ ရေးထားတာတွေက ဒူချာချာရယ် မကောင်းမကန်းတွေ ဖတ်ပေးလို့ကျေးဇူးပဲ Rea
ader ရေ ♥♥
Lollipop လေးလည်းပြီးသွားပြီ အဲ့ထဲက2တွဲလုံးကိုအရမ်းချစ်တာပဲ ဒေါက်တာပိစိလေးကိုလည်း နည်းနည်းocလိုက်တယ် ဟဲဟဲ အွန်း ပြီးတော့လေ fic ထဲမှာရေးထားတဲ့ နည်းအတိုင်းလိုက်ဆော့ဦးမယ် ပြီးတော့ crush ကြီးကိုလည်း ကားတင်ပြေးပြီး မမမိုးဆွေပြောသလိုမျိုး အဟမ်း လုပ်လိုက်တော့မယ်နော့ Lollipop ဆိုတဲ့အတိုင်းချိုတယ်  နွားပွဲစားလိုပဲ ဖြီးနေတာ အဟီးဟီး ♥
@Phoenix_Sean_Leo ဟုတ် မမမိုး​ဆွေလည်းဂရုစိုက်ပါ​နော်
@Phoenix_Sean_Leo Feedback သုံးခုလုံးအတွက် Thanks ပါ Reader ရေ အရင်ကလိုလိုင်းပေါ်သိပ်မရှိနိုင်တဲ့အတွက် စာမပြန်ဖြစ်တာပါ..။ ခေတ်ကာလမကောင်းတာမို့ ဂရုစိုက်ပါနော် ♥
"မြတ်နိုးခွင့်လေး''လေးပြီးသွားပါပြီရှင် fic ထဲကယုန်ကြီးကိုတော်တော်အမြင်ကတ်တယ် မထိန်းနိုင်လို့ ဆဲတောင်ဆဲမိသွားတယ် ဆောရီး ယုန်ကြီး အစကတော့မုန်းပါတယ်ဆိုပြီးတော့ ငါ့ခလေးကို အဲဗရီးဒေး အဲဗရီးတိုင်းနေတာ အသက်ကောကျန်သေးလား မသိ အိမ်း ဝမ်ရိပေါ် အစား ရင်လေးတယ် အရမ်း အရမ်းအရမ်းအရမ်းအရမ်းအရမ်းအရမ်းအရမ်းအရမ်းအရမ်းအရမ်းအရမ်း ကောင်းပါတယ် ကြိုက်တယ် အရမ်းကို ကြိုက်တယ် အစကတော့ အရမ်းကိုရက်စက်နေတာ နောက်ပိုင်းကျမှ ချိုသွားတော့တယ် ယုန်ကြီးတို့ရက်စက်ချက် ကမ်းကုန်ပဲ ပြီးတော့မှ ပေါ်လေးတဲ့ အဟင့် ကိုယ်ဘဲမရှိဘူး♥
"My Heartbeat'' လေးကိုဖတ်ပြီးသွားပြီ သိလား ရင်တွေတအားနာတာပဲ အဲ့ fic ထဲမှာအကုန်လုံးက ပေါ်ကြီးကိုအမြင်ကတ်ကြပေမဲ့ ကိုယ်တွေကတော့ ယုန်ကြီးကိုပဲမေတ္တာတွေ ပို့နေမိတာ အစစ်မနဲ့ နမ်းရသလားလို့ ပိုဆိုးတာက စပျစ်မဖြစ်နေလို့ တကယ်ပဲ မုန်းစရာကြီး ဟွန့် ရိပေါ်ကလည်းဆိုးချင်လို့ဆိုးတာမဟုတ်ပါဘူး အချစ်တွေမရခဲ့လို့ အရွဲ့ တိုက်တာပါ ending ဖတ်ပြီးတော့ သင်ခန်းစာရလိုက်ပါတယ် အော်..ဘဲမရှိရင်အနှိမ်ခံရပါလားလို့ အဲ့ဒါထက် တကယ်ကြီးဝမ်ရိပေါ်ကိုမရနိုင်တော့ဘူးလား ဗြဲ
မမမိုးဆွေရေ စားဘဲလေးအဆင်ပြေရင် up ပေးဦးလေနော် ပေါက်စီသုံးလုံးကိုတွေ့ချင်နေပြီ♥
ဟုန့်အခုဆိုရင်ဖြင့် ''Bunny and Honey''ficလေးကို ဖတ်လို့ပြီးမြောက်သွားကြောင်း လာပြီးသံတော်ဦးတင်တာပါရှင် အဟဲ ဟောဒီက reader လေးကနည်းနည်းချောင်နေလို့ ခွေးလွှတ်ပါရှန် အဟမ်း ဆက်ပြောပါ့မယ် ဒါလေးကလည်း ဖတ်ပြီးသားပါ ဘယ်လောက်ဖတ်ဖတ်ရိုးမသွားဘူး စခွီထနေရတယ် ကိုကိုကွေးနဲ့ပေါ်ပေါ်ပိန်း အရမ်းတွေချစ်ဖို့ကောင်းနေတာ တစ်ခါတစ်ခါဖတ်ရင်း တွံတွေးတောင်သီးတယ် ဒါလေးလည်း RL ထဲဒိုး အဟီး(0__o)>♥
@Sanay_Moe_Swe ဒလိမ့်ဆိုလည်းရပါတယ် ဖတ်မယ် မမမိုး​ဆွေ​ရေးထားတာပဲကို ♥
@Phoenix_Sean_Leo ကျေနပ်တယ်ဆိုလို့ ဝမ်းသာမိပါရဲ့_ ဪ ဒါနဲ့ My Heartbeat နဲ့ With the mine ကိုဖတ်မယ်ဆိုရင် ဒလိမ့်ပုံစံမျိုးမို့ အဆင်မပြေရင် မဖတ်နဲ့နော် ..။ Feedback အတွက် Thank you ပါReader ရေ♥♥